Indoda ethandwayo izonikezwa izenzo zakhe
Ngokuqinisekile bonke abesifazane ebuhlotsheni bacabange ngemiphi imizwa umuntu azizwa ngayo. Kulula kakhulu ukufunda lokhu. I-psychology ewusizo isayensi engasitshela okuningi ngamadoda ngokufaka, ukubonisa ubuso nesenzo. Udinga ukufunda izenzo, uma unokungabaza okuncane mayelana nobuqotho bobuhlobo kuwe, ukuqashelwa kwalo othandweni. Ukuxhumana ngezinga elingelona amazwi, njengombuso, akukwazi. Awukwazi ukulawulwa. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukufihla imizwa kuleli zinga noma kunzima kakhulu. Ngemva kokufunda izibonakaliso ezingezona izisho zokuthandana, owesifazane uzokwazi ukwakha ngokuziphatha kwakhe ngokubambisana nendoda, futhi lowo muntu uzomthanda kakhulu nakakhulu.
Imizwa yensizwa ingaba nomthelela okhanda ekhanda lakhe ngenkathi ingxoxo nentombazane. Angathinta kalula izinwele zakhe noma ahlasele. Uzokwenza kahle nangokuthula. Lokhu kuchazwa ngokulula: izinwele zabantu zihlotshaniswa nobulili babo. Ugcizelela ukucabanga kwakhe nokuheha, okwenza ukunyakaza kwesandla ngokusebenzisa izinwele zekhanda lakhe.
Uma umuntu ngaphandle kwesizathu esizwakalayo eqala ukulungisa i-tie yakhe noma ukubukela, uthinte izinkinobho noma ezinye izesekeli zakhe, mhlawumbe, uthola injabulo enkulu. Ngokuba insizwa ethandweni, lokhu kuyisici.
Izenzo zomuntu othandweni nencazelo yawo
Kodwa mhlawumbe ukhuluma nje ngokubonakala kwakhe. Ufuna ukujabulisa umngane wakhe, ezingeni elingenakuqonda, ufuna ukuzibeka ngokuhlelekile.
Uma umuntu echitha isikhathi esincane phambi kwesibuko, ubheka ukuhamba kwakhe, udonse isisu sakhe, ubeke ezinzwaneni zakhe, uzama ukuba omncane, omude, okhangayo, onamandla. Kubuye kufane nesifiso sakhe sokujabulisa owesifazane.
Imisindo yento engekho amazwi yomuntu othandweni impela inesifiso socansi. Lokhu kungenxa yokukhanga kwakhe okunamandla kowesifazane omthandayo. Futhi ngisho nasesimweni esingaqondakali, ufuna ukuzinaka, ngakho kugcizelela "ubukhulu besilisa". Uhlakaza imilenze yakhe kakhulu, hhayi nje ukuhlala, kodwa futhi ukuma. Ngokuvamile abantu abasha babeka izandla zabo noma iminwe yabo kuphela emaphaketheni wezingubo zabo, ngokuba ibhande nebhande, gcina izandla zabo kule ngxenye yomzimba lapho bekhuluma nodade abathandayo.
Ukuziphatha komuntu kungatshela okuningi ngemizwa yakhe. Insizwa ingakwazi ukukopisha ukuziphatha komuntu okhethiwe ngaphandle kokungabaza. Uphinda ukunyakaza kwakhe, isikhundla sezandla nekhanda, ukuma komzimba lapho uhlezi. Lokhu kusho isithakazelo esiqinile noma uthando lomfana. Uma ejwayele ukuxhomeka kulona wesifazane futhi ephakamisa amashiya akhe, ucabanga ngokuqhubeka nokuhlangana nokukhulumisana isikhathi eside.
Uma umuntu ephethe izinto ezizungezile, khona-ke lokhu kuyimpawu engavamile yothando. Indoda eshadile izophoqa indandatho yokuzibandakanya ngomunwe wayo, yenza imizamo yokuyisusa.
Lapho ukhuluma nentombazane, indoda ithinta indandatho yokuzibandakanya
Isibonakaliso sokubonakaliswa kwemizwa yomuntu ngentombazane ukuhlasela kwesikhala sakhe siqu. Lokhu kubangelwa isifiso sokuza eduze nenkosikazi yenhliziyo, ukuze uthole ithuba lokumthinta ngengozi noma kwezinye izinto zakhe.
Ezinye izibonakaliso ezingabonakali zihlanganisa abafundi bakhe, usayizi obanzi kakhulu lapho bebuka into ekhonjisiwe. Kuyichazwa injabulo nokukhululwa kwe-adrenaline egazini elivela ngesikhathi sokuxhumana.
Amahloni, ukudideka okukhulu kukhuluma nokuzwelana kwentombazane le ntombazane. Kungase kubonakale ngokucacile ubuso bonke noma amahlathi kuphela.
Mayelana nesithakazelo esiqotho kowesifazane uzokukhuluma nokubuka kwakhe. Indoda ethandwayo izohlala isifiso sokubheka indodakazi yakhe isikhathi eside.
Izimpawu ezingenhla zokuziphatha kwamadoda, ezithathwe ngokwahlukana, azisho ukuthi akakunandaba nawe. Kodwa ngokubambisana, lezi zibonakaliso ezingezona amazwi zizokukhuthaza ngemizwa yakhe eqotho kuwe. Ungangabazi, lokhu kuyisenzo nokuhamba komuntu kuphela othandana nawe.
Indoda ye-zodiac isayina i-scorpion
Kungani abantu bekhala?
Kulungile kanjani ukukhuluma nomfana (izimpikiswano nezingxoxo)?
Yini amadoda avuthiwe acabanga ngamantombazane amancane?
Izinhlobo ezingezona zendabuko zokubuthwa kwamadoda
Indlela yokusekela indoda esimweni esinzima?
Amadoda afana namabele amancane?
U-Anna Grachevskaya wazikhandla ekuphishekeleni ubuhle, isithombe
Ukucindezelwa kokuxilonga: ukwelashwa ngamakhambi abantu
Indlela yokukhetha i-garnet enhle
Izinhlobo nezindlela zokusikhipha ezisetshenziswayo
Amathiphu awusizo womzimba onempilo
Iladidi enomsoco kusuka kumatamatisi ebusika: zokupheka
Ukwamukela ingane yakho
Lapho ukuthenga ijaji: TOP-4 lemikhiqizo yeningi yentando yeningi yama-fashionistas
Cottage ushizi ngegalikhi
Indlela yokujwayelana nendoda yamaphupho akho
Indlela yokuchaza ingane ukuthi uzoba nomfowenu
Izinzuzo Zomhluzi Wezinkukhu
Abangenakulinganiswa nabathandekayo: ngalokho okufanele bagqoke abalahlekile kusuka kuLamoda - izicathulo ezinkulu zokwindla ka-2015
Umyeni emva kokuzalwa kwengane uthe angikuthandi
Amaqiniso anentshisekelo kusukela empilweni yobusha
Ngingazigeza kanjani umntwana osanda kuzalwa okokuqala?
Indlela yokuhlanza i-mascara